Uhambo oluya eRoma nezingane | Izindaba Zokuhamba
Uhambo oluya eRoma nezingane
UMariela Carril | | amaRom, Ukuhamba nezingane
Namuhla imindeni emisha ihamba nezingane, futhi abaningi bacabanga ukuthi ayikho indawo emhlabeni engeke ivakashelwe nabo. Kunjalo? Ngiyangabaza, kepha ngicabanga ukuthi ezinye izindawo zingcono kunezinye. Ngokwesibonelo, Ungakwazi ukuya eRoma nezingane?
Impendulo inguyebo, yize kufanele uhlale phansi ubone ukuthi idolobha libanikezani ngoba bafuna ukwazi, kuyiqiniso, kepha umlando noma ubuciko kungenzeka bungabathandi kangako. Ukuhlela. Lelo yigama uma kukhulunywa ngalo ukuhamba nezingane.
IRoma ingenye yezinhloko-dolobha ezinkulu zaseYurophu futhi inamakhulu eminyaka yomlando akhona kuwo wonke amagumbi. Umthandi womlando noma wezimangaliso zobuciko ehamba kuleli dolobha, kepha kuthiwani ngabancane?
Sishilo ngenhla ukuthi kufanele ubhake futhi kunjalo. Izingane azithandi olayini abade noma ukulinda ngakho-ke kuyalulekwa thenga amathikithi ngaphambi kwesikhathi ukugwema noma yikuphi ukulinda isikhathi eside. Into yokuqala-ke, ukuthi yazi iColosseum. Amathikithi ayatholakala ku-inthanethi, kepha uma ungenawo, umnyango waseningizimu weForamu noma iPalatine Hill unabantu abambalwa ukuze ukwazi ukusizakala futhi uthenge lapha.
Kunezinhlobo eziningi izinkambo eziqondisiwes futhi ungakhetha ukuvakasha kohlobo lomndeni kweColosseum neForamu. Amanxiwa awavamile ukudumaza, ingasaphathwa eyaseColosseum ngobukhulu bawo obukhulu. Bazoyithanda! Ikakhulukazi uma ukuvakasha kubayisa egumbini elingaphansi noma ezingxenyeni eziphakeme lapho ukubukwa kungcono khona.
Asishongo kodwa iColosseum, iForum kanye nePalatine Hill konke kunethikithi elifanayo ngakho-ke ukuvakasha kuyaqhubeka lapha, ngamanxiwa amaningi. Uma usuku libalele konke kungaphandle, ngakho-ke kuhle. Ukuvakasha kathathu kulandelana kungakhathaza ngakho-ke kungakuhle ukuthi kudliwe isidlo sasemini phakathi kwabo ukuze izingane zikwazi ukuphumula.
IColosseum iphelele kakhulu kepha iForamu iyiqoqo lamanxiwa angahlelekile futhi avulekele emcabangweni. Umqondo omuhle ukuwakhombisa ngaphambi kokuhambela ukuthi iForamu ibibukeka kanjani emakhulwini eminyaka adlule noma ulande leso sithombe kuselula yakho ukuze ukwazi ukudlala nokuqhathanisa. Isiphetho esihle salokhu kuvakasha okuphindwe kathathu ukuqeda phezulu kweNtaba iPalatine lapho unokubukwa okuhle khona kwamanye amasayithi amabili.
Phakathi kweColosseum neVittorio Emmanuel Monument kukhona umgwaqo obanzi futhi omude. Ukuhamba lapha ungabona amanxiwa we Imakethe kaTrajan eyakhiwa cishe nge-100 AD nalapho kusebenza khona izitolo namahhovisi angaba ngu-150. Kwakuyisayithi okufanele ngabe liyinto ongayibona. Eduze nakho Isekisi Maximus.
I-Circus Maximus yayijwayele ukwenzeka ukugijima kwezinqola. Namuhla umkhondo omkhulu ucwiliswe endaweni ende futhi ewumngcingo. Ngokucabanga okuncane umuntu angaphinda abuyele kulezo zinhlanga ezinhle futhi ezinomsindo ngesitayela esihle kakhulu seBen-Hur. Futhi, kwesinye isikhathi imicimbi ibanjwa ngaphakathi lapha, ngakho-ke uma kunjalo, ungafika uzungeze.
Futhi okuseduze kunenye iqoqo lamanxiwa: Amabhati kaCaracalla. Kumele ukuthi bebenethezeka kepha kusele izindonga ezimbalwa kanye nezinsalela zamachibi ezinemibala yazo. Iziphethu ezishisayo bezinkulu futhi zihamba ngemizuzu eyi-15 kuphela ukusuka kwaSekisi eseMaximus. Emnyango kuvame ukuba netafula elidayisa u-ayisikhilimu, okumnandi kakhulu, ngakho-ke ungenza "isitobhu sezobuchwepheshe" lapha izingane ezizokuthokozela.
Lezi zindawo zokugeza ezishisayo zazikhona eyakhiwe ngu-Emperor Caracalla ngo-AD 217. Ngokuwa kweRoma ngokuhamba kwesikhathi umsele owaletha amanzi waqhekeka, isiza saqala ukusetshenziswa ngabantu abangenamakhaya ngeNkathi Ephakathi, abanye bakhipha amatshe ukwakha izindlu futhi ngamafuphi, yile ndlela okusinde ngayo kulokhu usuku. Okuhle ukuthi kunezimpawu yonke indawo ezikhuluma le ndaba ukuze ukwazi ukuyitshela izingane zakho ngesineke.
Ngaphezu kwalokho, eminyakeni yamuva nje kwethulwe i- uhambo lwangempela olungokoqobo. Uhambo lubukelwa ngomsindo futhi ungabona ukuthi izindlu zokugezela zazinjani ngokusemandleni azo. Lokho ngeke kulibaleke enganeni, awucabangi?
Ngicabanga ukuthi ngokuyisisekelo ngalezi zindawo iRoma lasendulo lezingane limboziwe. Uma unesikhathi esithe xaxa, ungahlala uqasha ibhayisikili futhi uhambe uhambe e-Appian Way noma uvakashele i-villa yasebukhosini enhle, kepha ngesikhathi esincane noma nezingane ezingenandaba namaRoma amadala, lokhu kwanele. Manje kufanele uqhubekele ku IRoma lamaKristu futhi lapha futhi kuningi ongakubona ngakho-ke kufanele ukhethe.
Ungaqala nge I-Vatican okuyinhliziyo yobuKhatholika. Ungaya esigcawini uhambe ngezitebele eziseduze naso noma uthathe igxathu eliya phambili futhi vakashela iMinyuziyamu yaseVatican. Nayi ingcebo evela kuwo wonke umhlaba futhi kukhona okudumile ISistine Chapel. Umuntu angahamba amahora amaningi futhi angaze azi yonke into, kuyiqiniso, kepha akuwona umqondo omubi ukuthenga ithikithi nolayini. Bangu izinkambo zezingane.
La I-Basilica yaseSt Ingavala ukuvakashela eVatican futhi isithombe esinoSwitzerland Guard singaba yisikhumbuzo esihle kakhulu. Uma izingane zinamandla ungakhuphukela esiqongweni sesonto lesonto futhi ubheke eRoma. Enye into ongasoze wayilibala.
Ngaphambi noma ngemuva kweVatican ungaya kwifayela le- UCastel Sant'Angelo. Ngaphambi komnyango kunebhuloho elihlotshiswe ngezithombe. Le nqaba ibikade iyinqaba kapapa futhi kukhona umhubhe oyimfihlo oyixhumanisa neVatican. Namuhla umnyuziyamu uyasebenza futhi unendawo evulekile yokuba nemibono emihle yayo yonke into. Futhi kuthiwani nge- I-Pantheon? Lapha iRoma lasendulo lihlangana neRoma lobuKristu.
Ingesinye sezakhiwo ezigcinwe kahle zakudala zamaRoma futhi ihlehlela emuva ku-120 AD. Ingaphakathi layo linobukhazikhazi nelanga noma imvula ingena ivela emgodini ophahleni, uma unebhadi futhi lina ngosuku lokuvakasha kwakho. Nakhu kuphumula uRafael ngakho-ke kufanele ufune futhi uthole ithuna lakhe ngaphambi kokuhamba. Ekugcineni, ngaphandle kunezindawo eziningi zokudla noma zokuphuza okuthile ngakho-ke kungenye indawo enhle yokuphumula.
Ngokusobala IRoma lingumuzi ogcwele amasonto. Uma kukhona engikutholile, ngukuthi onke mahle futhi amaningi akhululekile futhi awaziwa. Eduze kweForamu kunamasonto amabili amancane futhi amahle, kepha uma ufuna okuthile okuthandwa kakhulu kukhona USanta Maria Maggiore ngobuciko be-mosaic obuthatha umoya wakho futhi obunye obungathakazelisa buncane ISonto LaseSanta Maria eCosmedin.
Yilapho kukhona Umlomo Weqiniso odumile, ngaphambi kokwakhiwa kwangempela kwesonto. Ungayithola eduze ne-Circus Maximus, ePlaza de la Boca de la Verdad. Uma izingane zakho ziyayithanda i-macabre I-crypt kufanele ibe sohlwini lwalokho okufanele ukuvakashele nezingane eRoma. Ungakhetha ifayela le- I-Crypt yamaMonks I-Cappuccinos, indawo enamakamelo ayisithupha agcwele amathambo nezinye izinsalela ezibonakala zimunyu.
La IVilla Borghese nezingadi zalo Umthombo weTrevi futhi okunye ukuvakasha emaphethelweni kungafakwa. Ostia Antica, the Amanxiwa ePompeii noma ngokuqhubekayo, Florencia, zisondele.
Ngiyacabanga ukuhlela kubalulekile lapho uhamba nezingane Yebo, ungahlela amaholide amahle kakhulu ezimpilweni zabo ngokubanikeza okuhlangenwe nakho. Akukona nje ukuhamba noma ukubona, kodwa kwenziwa: ukugibela ibhayisikili e-Appian Way, ukudlala i-gladiator eColosseum, ukubhalisela i-pizza noma isigaba se-pasta ...
Ungaphunyuki uzohamba nezingane. Kungaba kuhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ukuhamba nezingane » Uhambo oluya eRoma nezingane
Yini ongayibona eWroclaw